Qalab casri ah oo lagu soo kordhiyay dekedda Muqdisho - Halbeeg News
Qalab casri ah oo lagu soo kordhiyay dekedda Muqdisho
MUQDISHO (HALBEEG)- Wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryan Awey Jaamac ayaa maanta ka qeyb gashay munaasabad lagu qabtay dekedda magaalada Muqdisho taasoo lagu soo bandhigayay qalab casri ah oo lagu soo kordhiyay dekedda Muqdisho.
Qalabkan casriga ayaa waxaa magaalada Dubai ka keenay shirkadda Albeyrak ee gacanta ku heysa maamulka dekedda Muqdisho, iyadoo qalabkan uu sahlayo in maraakiibta xamuulka sida ay ku soo xiran karan dekedda.
Sami Erol maareeyaha shirkada Albeyrak ayaa tilmaamay in qalabkan uu wax badan ka tari doono howlaha shaqo ee ka socda dekadda Muqdisho, islamarkaan maraakiibta waaweyn ee sida xamuulka ay ku soo xiran karaan.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Aweys Jaamac ayaa bogaadisay qalabkan shirkadda Albeyrak ay ku soo kordhisay dekedda Muqdisho.
“Waxaan u mahad celinaya maamulka Shirkada Albeyrak horumarinta ay ka wadaan dekadda Muqdisho,islamarkaan qalabkaan lagu horumarinyo howlaha Dekada” ayay tiri wasiirka dekedaha Soomaaliya.
Dekedda magaalada Muqdisho ayaa hadda shaqeysa 24-saac iyadoo ay ku soo xirtan gaadiidka xamuulka qaada.
RW Kheyre oo la kulmay guddiga dib-u-eegista dastuurka
Amiirka Qadar oo ka baaqanaya shir madaxeedka dalalka Gacanka Carabta